गुडिरहेको बसमा पूर्णको जीवनमा लाग्यो पूर्णविराम - Naya Online
गुडिरहेको बसमा पूर्णको जीवनमा लाग्यो पूर्णविराम
शनिबार, भदौ १९, २०७८ (September 4th, 2021 at 10:50am ) प्रवास
क्वालालम्पुर, ४ सेप्टेम्बर । अप्रत्याशित ढङ्गले कहिले काहीँ यस्तो पनि हुन्छ –गुडिरहेको गाडी गुडी नै रहन्छ तर चलिरहेको जीवनमा पूर्णविराम लाग्छ । त्यसैले भनिन्छ –मृत्यु अनिश्चित छ ।
केही समय अगाडि एउटा हृदय विदारक तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल नै शोकमय बनायो । तस्बिर यस्तो थियो –गाडीको सिटमा बसेर चिर निन्द्रामा निदाएकी आमाको छातीमा टाँसिएर संसार नियाली रहेको दुधे बालक ।
काखमा नानी च्यापेकी आमाको –आँखा कति बेला बन्द भयो ! जीवन कति बेला बन्द भयो ! कसैले भेउ पाएनन् । आमाको काखबाट उछिट्टिएर जब दुधे बालक सिट मुनी खस्यो र चिच्यायो तब मात्र सँगै यात्रा गरिरहेकाहरूले चाल पाए । विडम्बना ! कहिल्यै नउघ्रिनेसरि आँखा चिम्लिसकेकी थिइन आमाले, कहिल्यै अगाडि नबढ्ने गरी जीवनको गति रोकिई सकेको थियो आमाको । र पनि बाल चेतनालाई भ्रममा राख्न दुधेबालकलाई मृतमाको छातीमा टाँसियो । यो उद्देश्यले कि ! कम्तीमा शरीरको तातोपन रहुन्जेल बच्चाले ममताको न्यानो अनुभूति गरोस् ।
ठिक यस्तै झल्को दिने घटना एकजना नेपाली मजदुरमाथि मलेसियामा घटेको छ । घट्न हो –३ सेप्टेम्बर, शुक्रवार बिहान । ती नेपाली मजदुर हुन –रामेछाप जिल्ला खाँडदेवी गाउँपालिका वडा नं.२ निवासी वर्ष ३३ का पूर्णलाल मोक्तान ।
मेरुमा रहेको टपग्लोव कम्पनीमा कार्यरत रहेका पूर्ण बिहीबारको नाइट डिउटी सकेर शुक्रवार बिहान कम्पनीको गाडीमा होष्टल फर्कँदै थिए । तर, पेटालिङजयामा अवस्थित होस्टेलसम्म पुग्न सकेनन् । गुडिरहेको बसको सिटमै बसिरहेको अवस्थामा उनको प्राण पखेरु उड्यो ।
गुडिरहेको बसमा पूर्णको जीवनले कति बेला पूर्णविराम लगायो ? कसैले भेउ पाएनन् । तर, जब उनको हातमा रहेको मोबाइल भुईँमा खस्यो, बसभित्रका अरू साथीले फोन खस्यो भनेर सचेत गराए । सचेत गराउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि नजिकैको सिटमा बसेको साथीले मोबाइल टिपे र निदाएको होला भनेर झकझकाउँदै हातमा राखिदिन खोजे । तब मात्र चाल पाए –पूर्णको जीवनले थाहै नदिई पूर्णविराम लगाई सकेछ ।
यसरी अप्रत्याशित अस्ताएका पूर्णको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि केलाङ हस्पिटल लगेको जनाइएको छ । मृत्युको कारण पोष्टमार्टम रिपोर्ट पछि आउला नै तर, एउटै कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरूको अनुसार उनमा कुनै पनि रोग नभएको र त्यस्ता कुनै पनि औषधी सेवन नगरेको बताइएको छ ।